Fatana mitsitsy : mihena 40% ny fandaniana saribao | NewsMada
Fatana mitsitsy : mihena 40% ny fandaniana saribao
Vitsy ny mahafantatra ny tombontsoa azo amin’ny fatana mitsitsy. Manaitra ny sain’ny rehetra ny WWF, satria ahazoana tahirim-bola ao an-trano, ary miaro ny ala rahateo.
Hataon’ny fikambanana WWF vaindohan-draharaha ny fanentanana ny Malagasy hampiasa fatana mitsitsy, amin’ity taona 2018 ity. Lohahevitra ny hoe “mitsitsy mba haharitra. Ndao hampiasa fatana mitsitsy”. Tanjona ny handraisan’ny Malagasy tsy ankanavaka anjara amin’ny fiarovana ny ala, toeram-ponenan’ireo biby sy zavamaniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara.
Miantoka ny firindran’ny zavamananaina ny ala, manana anjara goavana manoloana ny fiakaran’ny hafanan’ny toetr’andro satria mitroka ny karbôna eny amin’ny atmosfera. Miantoka ny fihodinan’ny fotoam-pambolena, mamatsy ny fanafody avy amin’ny zavamaniry, ny hazo hanaovan-trano sy ny nahandro. Araka ny fanadihadian’ny WWF, mampiasa hazo ahandroana sakafo ny 98%-n’ny tokantrano malagasy. Mihena 40% ny fandaniana saribao raha mampiasa fatana mitsitsy. Mandany saribao 30 kilao isam-bolana ny tokantrano, ahitana olona enina, mampiasa fatana mitsitsy, raha mandany 50 kilao ny mampiasa fatana tsotra. Ahazoana mitahiry vola 7.000 Ar isam-bolana izany ary manavotra foto-kazo enina isam-bolana ihany koa.
Maromaro ny hetsika hatao amin’ity volana janoary ity eto Antananarivo, Ambilobe, Andapa, Morondava ary Toliara. Fanentanana any an-tsekoly, eny an-tsena, fifaninanana fifidianana “Master chef Mitsitsy”.
Hisy hetsika manokana ny asabotsy 24 marsa 2018 mandritra ny “Adiny iray ho an’ny tany”, ankalazaina manerana ny firenena 100. Miisa 750 ny fatana mitsitsy aparitaka manerana ny Nosy.